'लोग्ने भनेको स्वास्नीको शरीर बलियाे हुँदा मात्र आफ्नो हुने रहेछ’ – सुष्मा - ।। Naya Kuro ।।
१७ कार्तिक २०७६, आईतवार २१:३४ November 3, 2019 Naya KuroLeaveaComment on ‘लोग्ने भनेको स्वास्नीको शरीर बलियाे हुँदा मात्र आफ्नो हुने रहेछ’ – सुष्मा
सुष्मा देवकोटा -५ बर्षकी छोरीकी आमा भै सकेकी एकजना सफा चरित्रकी साथीले पहिलो पल्ट मलाई सुनाई के गर्नु यार सुष्मा बुढो आफूलाई पुगेपछि उता पट्टी फर्कीएर मज्जाले सुत्छ, आफूलाई निन्द्रै लाग्दैन । केही महिना पछि उसलाई फोन गर्दा उसले अर्को स’मस्या सुनाई खोई के भको हो यसलाई केटीसंग पल्केर हो की के हो मेरो र छोरीको त वास्ता ब्यास्ता गर्दैन फेसबुकमा मात्रै झुण्डि रहन्छ ।
मैले श्रीमान श्रीमतीबिचको सामान्य कुरा सम्झेर उसलाई सम्झाएँ । उ अफिसमा काम गर्छे, लोग्ने र छोरीको पनि राम्रै ख्याल राखेकी छ।बुढाबुढीमा हुनुपर्ने सबै ब्य’वहार सामान्य छ । दुवै पट्टीका परिवारका प्रिय बुहारी ज्वाईं हुन् । पैसा छ, सुविधा छ सबै राम्रो छ तै पनि उसले पछिल्लो समय पटक-पटक यो कुरा दोहोर्याईरहेकी छ ।
अर्की दिदीले पनि आफ्नो समस्या सियर गरिन् छोरा पेटमा आएपछि बुढाले मलाई वास्ता गर्द छोडेको अहिले छोरा १० बर्षको भयो दुनिया केटीसंग लागेको छ भनेर सुनाउँछन्, जीन्दगी यस्तै रहेछ बैनी । लोग्ने भनेको स्वास्नीको शरिर बलियो हुँदा मात्र आफ्नो हुने रहेछ । केहि बर्ष पहिले म डेरा गरेर बस्ने घरको पल्लो घरमा एकजना २७ बर्षकी युवती बस्थिन उनको १ वटा छोरा थियो हुर्किसकेको ।
कसो कसो उनि र म साथी बनेका थियौं । मिल्न थालेपछि उनले सुनाएकी थिईन् सुष्मा मेरो त १४ बर्षको हुँदा ३१ बर्षको केटासंग बिबाह भएको हो । बिचार नमिलेपनि छोरा जन्मियो ।उसको माया नै नलागेपनि अरुसंग जान सकिन समाजको डरले । म अहिले कसैको प्रेममा छु,
यो कुरा थाहा भयो भने मलाई त वेश्या नै सम्झन्छन् किनकी उसंग मेरो शारिरीक सम्बन्ध पनि छ । मैले कोशिष गरेको हुँ आफ्नै लोग्नेबाट माया पाउन तर खै के मिलेन मिलेन । उसलाई सुनाउँ भने आफ्ना बानि सुधार्न मायाले फकाउन भन्दा कसले सिकायो यो कुरा भनेर उल्टो खेप्छ ।
आईमाई मन त हो, मायाले बोलोस् कियर गरोस संगै घुम्न जाउँ, जस्तो लाग्दोरहेछ । उसले मेरो वेवास्ता गर्दा म नचाहँदा नचाहँदै पनि अर्कैको मायाँमा परें । यी त प्रतिनिधी पात्र र उदाहरण मात्र हुन् । धेरै अघि देखी म यौ’नले निम्त्याउने समस्या माथी कथा लेख्दै आएकाले पनि म संग यस्ता समस्याका चाङ नै छन् । मेरो बिचारमा यौ’न कुण्ठा र त्यसले निम्त्याउने दु’र्घटना सा’मान्य कुरा होईनन् ।
यो लेखिनु पर्ने बिषय हो बि’षेशत महिलाका मामिलामा यस प्रकारका स’मस्या धेरै देखिन्छन् । केटीमान्छेले आफ्ना धारणा जस्तै स’मस्या पनि श्रीमानलाई बताउन सकिरहेका छैनन् । श्रीमान सं’भोग पछि आफ्नो वास्ता सम्म नगरी उता फर्किएर निदाउँछ यो गुनासो अत्यन्त धेरै छ महिलाहरुमा ।
यसबाट के बुझिन्छ भने श्रीमती शरिर भन्दा ज्यादा मायाको आवश्यकता महशुष गर्छन । भर्खरै कार्यान्वयनमा गएको परिमार्जित मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद – १८ करणी सम्बन्धी कसूरको दफा दुई सय १९ को उपदफा ५ मा पत्नीलाई जबर्जस्ती गरे पतिलाई ५ वर्ष कैद सजाय हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ
जसमा पतिले यौन सम्पर्कका लागि पत्नीसँग स्वीकृति लिनैपर्ने र पत्नीले आफूलाई पतिले जबर्जस्ती करणी गरेको उजुरी दिएमा कानुन अनुसार कारबाही भोग्नुपर्नेछ भनिएको छ । यो कानुनको सदुपयोग गर्ने हो भने हामीले कल्पनानै नगरेको संख्यामा लोग्नेबाट बलात्कृत हुने महिलाका उजुरी पर्ने छन् तर मलाई लाग्छ यो मुद्धा हेर्न बसेको निकायलाई जति फुर्सद अरुलाई हुने छैन ।
किनकी शिक्षीत भन्दा शिक्षित महिलापनि आफुलाई लेग्नेले बलात्कार गर्छ भनेर उजुरी दिन हिचकिचाउँछन्, डराउँछन् भने साधारण महिलाले यो सकसलाई दुनियासामु ल्याउने कुरा ब्यवहारमा लागु हुने सम्भावना ज्यादा भन्दा ज्यादा न्युन नै हुन्छ ।
पहिलो कुरा त लोग्नेले आफुलाई ईच्छानै नहुँदा पनि भोग गर्छ भने पनि उसले यो कुरालाई मनमै दवाएर राख्छे । आफ्ना नजिकका साथीलाई सम्म सुनाउन सक्दैनन् महिलाले । सुनाईनै हाले पनि दोस्री महिलाले सामान्य सुझाव दिएर यो बिषयबाट अलग हुन खोज्छन् । सेक्स शब्द नै लाजसंग जोडेर हेरिने हाम्रो समाजले लोग्नेलाई दिएजती अधिकार स्वास्नीलाई दिनै सक्दैन ।
हाम्रो समाजमा परपुरुषसंग एक पटक मात्र एक पटक शारिरीक सम्पर्क राखेको श्रीमानले थाहा पायो भने उसले कुनै पनि हालतमा त्यो श्रीमतीलाई स्वीकार्न मान्दैन्न यसमा अधिकांश पुरुष मन दु:खेर भन्दा पनि उसले आफ्नो म:र्द स्वाभिमानमा धक्का लागेको सम्झन्छ ।
३ बर्ष अघि मेरो यसरी गरें मैले श्रीमतीको हत्या शिर्षकको कथा पढेर एकजना बिबाहित युवतीले मलाई लामो म्यासेज गरिन् आफ्नो श्रीमानले आफुलाई दिएको पिडा सहित ।
उनिसंग कुरा हुँदै जाँदा उनले आफ्नो ब्यथा सुनाईन् अरुबेला बेवास्था गर्ने केटीहरुसंग हिड्ने उनको लोग्नेले राती ओछ्यानमा आफुलाई मनपरि गर्दा मानसिक रुपमा असाध्यै पिडा हुने कुरा सहित । यसै बिषयमा परेको झगडामा उनले मलाई तपाँईसंग सेक्स गर्न मन छैन के भनेकी थिईन् उनका श्रीमानले बेसरी कुटे त्यसपछिका हरेक रात उनको गुप्तागंमा होईन गुद्वारमा छिर्न थाल्यो पुरुष प्रमाणित गर्ने उसको अंग त्यो पिडा सहन नसकिने खालको भएपनि उनले आजसम्म कसैलाई भन्न सकेकी छैनन् किनकी उनलाई समाजले आफैंलाई दोस लगाउँछ भन्ने डर रहेछ ।
श्रीमतीले आफु शारिरीक सम्पर्कमा सन्तुष्ट नभएको कुरा सुनाउँदा श्रीमानले सिधै आफ्नो पुरुषार्थमा औंला उठाएको सम्झेर जुन ब्यवहार ति महिलाईलाई गर्यो त्यस्ता बलत्कारका उजुरी गर्दा महिलाले आफ्नो अझ बदनाम हुने महशुष गरेको पाईन्छ । २०७३ साल कात्तिक र मंसिरको महिना भाईरल भएको समाचार थियो कन्चन शर्मा रेग्मी ।
समाचारका शिर्षक उनका पूर्व पति मोहन रेग्मी र उनको सम्बन्धमा मात्र केन्द्रित भयो तर यो झगडाको मुल कारण अदृश्य रर्यो । त्यो समय यी पति पत्नी दुबैले आफु बलात्कृत भएको अभिब्यक्ती दिएका थिए । मोहनले कन्चनबाट आफु बलात्कृत भएको बताए कन्चनले मोहनबाट । दुईजनाको मनसंगै शारिरीक सम्पर्कपनि बाझिएको रहेछ भन्ने कुरा प्रस्ट थियो ।
यसरी म बेश्या बने शिर्षकको मेरो कथा पढेर धेरै राम्रा प्रतिकृया आए । जसमध्य एकजना गणेश नामका ब्यक्तीले पढाएको मेलमा भनिएको थियो । ‘तिम्रो रेट कति हो, म बिदेशमा छु तिमी संग सेक्स गर्न मन लाग्यो, जति पैसा भन्छौ त्यती दिन्छु ।’ अव भनौं त्यो कथा एकजना केटिले जीवनमा गर्नु परेको पिडादायी संघर्ष थियो, धेरैले बुझेपनि हाम्रो समाजमा यस्ता धेरै गणेशहरु छन् जो संग पाएँ भने म पनि किन छोड्ने, यस्तो अप्ठ्यारोमा रैछे अलिकती पैसा दिएत मानिहाल्छेनी भन्ने मानसिकता छ । उनले कथा कसले लेख्यो को हो तिर भन्दा पनि आफ्नो मानसिकता प्रस्तुत गरे । यहि युवकले भोली ‘बिहे गरेपछि आफ्नो श्रीमतीलाई बलत्कार गर्ला कि नगर्ला ?
संभोगका लागि स्त्रि शरिर र मन पनि उत्तीकै सक्रिय हुन्छ जति पुरुष शरिरर मन हुन्छ । तर हाम्रो समाजमा श्रीमतीलाई मन लाग्यो भनेपनि श्रीमानले कहिले आफैं भन्देला भनेर कुर्नु पर्छ श्रीमानलाई मन लाग्यो भने अनुमती सम्म माग्नु पर्दैन । एउटै घरका लोग्ने स्वास्नी लोग्ने राती अवेर आएर सजिलै भन्छ यार साथीहरु थिए आउनै दिएनन् त्यो समय श्रीमानले यो बुझ्दैनन् कि साथी त बुढीका नि छन् उ पनि यो समय सम्म बाहिर बसेर आईभने मेरो मनले के ठान्छ ? कतियप बिबाहित पुरुषका साथीहरुले घर छि’टो जाने केटालाई जो’ईटिङ्ग्रे नि भन्दा रहेछन् ।
यहि डरले श्रीमतीलाई भन्दा बढि समय साथीभाईलाई दिने गरेको पाईन्छ । पुरुष स्वाभिमान भनेको आफ्नी स्वास्नी संग नझुक्नु हो र ? श्रीमतीको महत्वलाई प्रेम गरेर सकेजति माया र साथ दिनेहरु पो पुरुष । एउटी नारीको मनमा बस्न पाउनुनै पुरुषको ठुलो भाग्य हो, उसले जति प्रेम दिन्छ श्रीमतीले बदलामा उसलाई लाखौं गुणा बढि माया गर्न सक्छे । किनकी स्वभावैले नारी कोमल हुन्छन् । सबै पुरुषले आफ्ना श्रीमतीलाई यसरी माया गरिदीउँ की कहिल्यै श्रीमतीको मन र कानुनी दायरामा आफु बलत्कारीका रुपमा उभिनु नपरोस् ।
ताजा समाचार बाट
विद्यालयस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरु
आज १८ कार्तिक २०७६ (Nov.04) सोमवार को राशिफल
३१ भाद्र २०७६, मंगलवार २०:०१ September 17, 2019 Naya Kuro
१६ असार २०७६, सोमबार ०६:२२ July 1, 2019 Naya Kuro